Bhuku Rechipiri raSamueri 12:1-31
Natani anotsiura Dhavhidhi (1-15a)
Mwanakomana waBhati-shebha anofa (15b-23)
Bhati-shebha anobereka Soromoni (24, 25)
Guta revaAmoni rinonzi Rabha rinotorwa (26-31)
12 Jehovha akabva atuma Natani+ kuna Dhavhidhi. Akapinda maaiva,+ akati: “Mune rimwe guta maiva nevarume vaviri; mumwe wacho aiva mupfumi mumwe ari murombo. 2 Mupfumi wacho aiva nemakwai nemombe zvakawanda chaizvo;+ 3 asi murombo wacho aingova negwayana gadzi rimwe chete raakanga atenga.+ Akarichengeta uye rakakura ainaro, iye nevanakomana vake. Raidya pazvekudya zvishoma zvaaiva nazvo, uye rainwira mukapu yake, richirara mumaoko ake. Airibata semwanasikana wake. 4 Nekufamba kwenguva, mupfumi uya akashanyirwa nemuenzi, asi haana kuda kutora chero gwai rake kana mombe yake kuti abikire munhu aiva parwendo akanga amushanyira. Asi akatora gwayana remurombo wacho, akariurayira munhu akanga amushanyira.”+ 5 Dhavhidhi akabva atsamwira murume wacho chaizvo, akati kuna Natani: “NaJehovha mupenyu,+ munhu akaita zvakadaro anofanira kufa! 6 Anofanira kuripa gwayana racho kakapetwa kana,+ nemhaka yezvaakaita uye nekuti haana kunzwa tsitsi.” 7 Natani akabva ati kuna Dhavhidhi: “Ndimi munhu wacho! Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri: ‘Ndakakuzodza kuti uve mambo waIsraeri,+ uye ndakakununura muruoko rwaSauro.+ 8 Ndaida kukupa imba yashe wako+ uye ndaida kukupa madzimai ashe wako,+ uye ndakakupa imba yaIsraeri neyaJudha.+ Kuwedzera pana izvozvo, ndaitoda kukuitira zvimwe zvakawanda.+ 9 Wakaitirei zvakaipa pamberi paJehovha uchizvidza shoko rake? Wakauraya Uriya muHiti nebakatwa!+ Wakabva watora mudzimai wake kuti ave mudzimai wako,+ pashure pekunge wamuuraya nebakatwa revaAmoni.+ 10 Saka bakatwa harisi kuzobva mumba mako,+ nekuti wakandizvidza pawakatora mudzimai waUriya muHiti kuti ave mudzimai wako.’ 11 Zvanzi naJehovha: ‘Ndiri kukuunzira dambudziko richabva mumba mako;+ ndichatora madzimai ako wakatarisa ndichiapa mumwe murume,*+ uye acharara nemadzimai ako masikati machena.*+ 12 Iwe wakazviita pachivande,+ asi ini ndichaita izvi pamberi pevaIsraeri vese, masikati machena.’” 13 Dhavhidhi akabva ati kuna Natani: “Ndakatadzira Jehovha.”+ Natani akapindura Dhavhidhi achiti: “Jehovha akuregereraiwo chivi chenyu.*+ Hamuchafi.+ 14 Zvisinei, nemhaka yekuti makazvidza Jehovha zvikuru nezvamakaita, mwanakomana wenyu achangobva kuberekwa haasi kuzorarama.” 15 Natani akabva aenda kumba kwake. Jehovha akabva arova mwana waDhavhidhi akanga aberekwa nemudzimai waUriya nechirwere. 16 Dhavhidhi akateterera kuna Mwari wechokwadi achiitira mukomana wacho. Dhavhidhi akatsanya asingatombodyi chinhu, uye aipinda mumba make, opedza usiku hwese akarara pasi.+ 17 Saka vakuru veimba yake vakamira paaiva vakaedza kumusimudza kuti amuke, asi akaramba uye haana kubvuma kudya navo. 18 Pazuva rechi7, mwana wacho akafa, asi varanda vaDhavhidhi vaitya kumuudza kuti mwana akanga afa. Vakati: “Patakataura naye mwana achiri mupenyu, haana kutiteerera. Ko kuzoti tikamuudza kuti mwana afa? Anogona kuzotiitira zvimwe.” 19 Dhavhidhi paakaona kuti varanda vake vakanga vachizevezerana, akaziva kuti mwana akanga afa. Dhavhidhi akati kuvaranda vake: “Mwana afa here?” Ivo vakati: “Ehe, afa.” 20 Dhavhidhi akabva asimuka pasi paakanga akarara. Akabva ageza akazora mafuta,+ akachinja zvipfeko zvake, akaenda kuimba+ yaJehovha, akanamata. Pashure paizvozvo, akaenda kumba kwake, akakumbira kuti aunzirwe zvekudya, achibva adya. 21 Varanda vake vakamubvunza kuti: “Ko chirudzii chamuri kuita? Mwana paaiva mupenyu makatsanya mukaramba muchichema; asi paangofa, mamuka mukatanga kudya.” 22 Iye akapindura kuti: “Mwana paaiva mupenyu, ndakatsanya+ ndikaramba ndichichema nekuti ndaiti, ‘Zvimwe Jehovha achandinzwira nyasha, oita kuti mwana ararame?’+ 23 Iye zvino zvaafa, ndichatsanyirei? Ndinokwanisa kumumutsa here?+ Ndichaenda kwaari,+ asi iye haachadzoki kwandiri.”+ 24 Dhavhidhi akabva anyaradza mudzimai wake Bhati-shebha.+ Akapinda maaiva, akarara naye. Nekufamba kwenguva, mukadzi wacho akabereka mwanakomana, akatumidzwa kuti Soromoni.*+ Jehovha akamuda,+ 25 uye akatumira shoko achishandisa muprofita Natani+ rekuti mwana wacho atumidzwe kuti Jedhidhiya,* nekuda kwaJehovha. 26 Joabhi akaramba achirwa neRabha+ yevaAmoni,+ akatora guta reumambo hwacho.+ 27 Saka Joabhi akatuma nhume kuna Dhavhidhi akati: “Ndakarwa neRabha,+ uye ndakatora guta remvura.* 28 Unganidzai vamwe varwi vese mudzike musasa kuti murwise guta racho, muritore. Kana zvikasadaro, ndini ndinenge ndava kuzotora guta racho, mbiri youya kwandiri.”* 29 Saka Dhavhidhi akaunganidza varwi vese, akaenda kuRabha, akarwa nayo, akaitora. 30 Akabva abvisa korona yaiva mumusoro maMarikamu.* Goridhe rayo rairema tarenda* rimwe chete, uye yaiva nematombo anokosha, uye korona yacho yakaiswa mumusoro maDhavhidhi. Akapambawo zvinhu zvakawanda chaizvo+ muguta racho.+ 31 Akabudisa vanhu vaiva mariri akavapa basa rekucheka matombo, nerimwe basa ravaiita nemidziyo yesimbi yakapinza, nematemo esimbi, uye rekukanya zvidhinha. Ndizvo zvaakaita kumaguta ese evaAmoni. Dhavhidhi akabva azodzokera kuJerusarema nemauto ese.
^ Kana kuti “ndichiapa murume wekwako.”
^ ChiHeb., “zuva iri rakatarisa.”
^ Kana kuti “asiyawo chivi chenyu chichipfuura.”
^ Zita iri rinobva pashoko rechiHebheru rinoreva kuti “Rugare.”
^ Kureva kuti “Anodiwa naJah.”
^ Zvingava zvichireva kwaiwanikwa mvura muguta racho.
^ ChiHeb., “zita rangu roshevedzwa pariri.”
^ Marikamu chinogona kunge chaiva chidhori chainamatwa nevaAmoni.